Tafakatra 100 Ny Isan’ireo Maty Taorian’ny Fipoahan’ny Kamiao Mpitondra Akoran’Afo Tao Afovoan’i Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Tafakatra 100 Ny Isan'ireo Maty Taorian'ny Fipoahan'ny Kamiao Mpitondra Akoran'Afo Tao Afovoan'i Mozambika
Voadika ny 03 Desambra 2016 5:26 GMT
Kamiao mpitondra akoran'afo nipoaka taorian'ny halatra akoran'afo, nahatonga ny isan'ireo niharam-boina ho maro . Sary avy amin'ny Twiter.
Tafakatra ho 100 ny isan'ireo maty taorian'ny fipoahan'ny kamiao mpitondra akoran'afo tao Caphiridzange, ao amin'ny faritanin'i Tete, afovoan'ny Mozambika araka ny tatitry ny manampahefana tao an-toerana . Tamin'ny 17 Novambra teo no nitrangan'ny loza rehefa nisy vondron'olona nikasa hangalatra akoran'afo tao amin'ny kamiao izay nirehitra ka nahatonga fahafatesan'olona miisa 43 avy hatrany sy nahamay olona hafa miisa 110, misy olon-dehibe misy ankizy.
Nilaza ny Governemanta tamin'ny 29 Novambra fa manao izay ho afany izy ireo isorohana ny fitomboan'isan'ireo maty. Kanefa tsy nitsaha-nitombo hatrany izany na dia teo aza ny ezaka, sy noho ny ratra mafy nahazo ireo olona .
Tamin'ny fivoaram-baovao farany momba ny zava-nitranga, nanoratra tao amin'ny kaontiny Facebook i Rafael Machalela hoe:
O número oficial de vítimas mortais na tragédia de Capirizhange já contabiliza uma centena. Esses são números oficiais, mas existe a possibilidade de alguns terem perecido nas suas casas por não dar crédito às unidades sanitárias, confiando sua saúde aos curandeiros.
Efa zato eo ny isan'ny maty ofisialy tamin'ny voina nitranga tao Capirizhange. Io no isa ofisialy kanefa mety hisy maty any an-tranony ny sasany noho ny tsy fisian'ny vola handehanana any amin'ny toeram-pitsaboana ka miantehatra amin'ny mpanasitrana.
Tao amin'ny fanehoan-kevitra momba ny lahatsoratra, nanaiky i Gulumba Mutenda fa:
(…) para além dos que morreram em casa, alguns números são mesmo ocultados no próprio hospital, para diminuir a pouca vergonha por causa da fraqueza das nossas unidades sanitárias.
(…) Nafenimpenina ny isan'ireo maty tany amin'ny hopitaly ankoatra ireo izay maty tany an-tranony mba tsy hisian'ny fahamenarana noho ny tsy fahatomombanan'ireo tobim-pahasalamana .
Fanindroany izao no nisy tranga nahafatesan'olona tao Tete tamin'ity taona ity. Tamin'ny volana Janoary, fara fahakeliny, olona miisa 75 no maty noho ny fanapoizinana avy amin'ny zava-pisotro fantatra ao an-toerana amin'ny anarana hoe “Pombe” tao an-tanàndehiben'i Chitima.
Ho setrin'ny fanehoan-kevitr'i Rafael Machalela tao amin'ny Facebook, malahelo noho ny tsy fisian'ny fifanakalozan-kevitra lalina tamin'ny zava-nitranga i Maria João Marques:
É triste que uma tragédia destas não leve a uma reflexão crítica sobre os acontecimentos! Mas enfim!
Mampalahelo fa tsy misy ny fandinihana lalina amin'ny voina toy izany! Na izany aza!
Tao amin'ny Twitter, nantsoin'i José Guerra ho “kamiaon'ny fahafatesana” ilay kamiao lehibe voalaza fa nitondra akoran'afo niala tao amin'ny seranan-tsambon'i Beira ho any Malawi :
"O camião cisterna da desgraça no local da tragédia no Distrito de Moatize em Tete – Moçambique." pic.twitter.com/hugsGgXM6k
— José Guerra (@Jose_Guerra_MZ) November 20, 2016
“Ilay kamiao mpitondra solika ratsy fiafarana teo amin'ny toerana nisian'ny loza ao amin'ny distrikan'i Moatize ao Tete – Mozambika.” pic.twitter.com/hugsGgXM6k
Milaza ho tsy mahafantatra izay antony nahatonga ny fipoahana ny Governemanta ao Mozambika ary nanangana Vaomieran'ny fanadihadiana mba hanazavana ny raharaha. Ambara amin'ny herinandro manaraka ny tatitra.
Na izany aza, nisy ny tatitra sasany avy amin'ireo olom-pirenena ao an-toerana nilaza fa nirehitra aloha ilay kamiao lehibe talohan'ny zava-nitranga ny alin'iny, noho ny fitselarana (court-circuit) nitranga tao amin'ny maoteran'ny paompy mpisintona akoran'afo avy ao amin'ny fitoerany an'ilay kamiao no nahatonga izany. Mampiseho ny fotoana nangalan'ireo olona ny solika ny sary nivoaka tao amin'ny Twitter:
#VIDEO mostra como comecou a festa que terminou em tragedia causando mais de 80 mortos e centenas de feridos em #Tete, #Mocambique. pic.twitter.com/PAG695vMQj
— Alexandre Zerinho (@AllexandreMZ) 23 de novembro de 2016
#LAHATSARY mampiseho ny fanombohan'ny zava-nitranga izay niafara tamin'ny loza nahafatesan'olona miisa 80 ary naratra an-jatony tao #Tete, #Mozambika. pic.twitter.com/PAG695vMQj
Taorian'ny fahamaizana voalohany izay noheverina fa efa maty ary efa tsy teo intsony ny mpamily, dia nanomboka “nisintona” ny solika tao amin'ny fitoeran'akoran'afo faharoa izay tsy voakasika tamin'ny fahamaizana ny mponina. Tamin'izay indrindra no nipoaka ity fitoerana faharoa ity ary nahafaty olona miisa 43 avy hatrany sy naharatra olona hafa miisa 110.
#VIDEO: Camiao tanque que causou cerca de 60 obitos e mais de 100 feridos em chamas na provincia de #Tete, #Moatize. #Mocambique pic.twitter.com/etgmQy8Hpe
— Alexandre Zerinho (@AllexandreMZ) 18 de novembro de 2016
#LAHATSARY: Ny fitoeran'akoran'afon'ilay kamiao mpitondra solika izay nahatonga fahafatesan'olona miisa 60 sy naharatra olona miisa 100 mahery vokatry ny fahamaizana tao amin'ny faritanin'i #Tete, #Moatize. #Mozambika pic.twitter.com/etgmQy8Hpe
Amin'izao fotoana izao, olona maratra miisa 44 no mbola any amin'ny hopitaly, mbola miady amin'ny fahafatsesana ny fito amin'izy ireo. Nahitana ankizy miisa valo sy vehivavy bevohoka iray ireo niharam-boina ao amin'ny hopitaly .
Taorian'ny loza, nanambara fisaonam-pirenena maharitra telo andro ny governemanta
2 herinandro izayFahasalamàna